गोविन्द केसी – Himalaya Television
२५ असोज, २०७७ काठमाडौं । सरकारसँग आठ बुँदे सहमति भएपछि डाक्टर गोविन्द केसीले २८औं दिनमा अनशन तोड्नु भएको छ । अनशनको २७ औँ दिनमा गएराति सरकार र केसीबीच ८ बुँदे सहमति भएको थियो । कोरोना संक्रमणपछि निको भएका त्रिभुवन...
डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने युवाहरु पक्राउ
१० असोज, २०७७ काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न मागहरु राख्दै १९ औँ पटक अनसन बसिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा माइतीघरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध र डाक्टर केसीको पक्षमा नाराबाजी गर्दै...
डाक्टर गोविन्द केसीमाथि विमानस्थलमै भयो यस्तो ज्यादत्ति (भिडियोसहित)
६ असोज, २०७७ काठमाडौं । काठमाडौं आएका डाक्टर गोविन्द केसीलाई विमानस्थलबाट अस्पताल लैजाँदा सरकारले जबर्जस्ती गरेको छ । नेपालगञ्जबाट आएका केसी सिधै शिक्षण अस्पताल जान चाहनुहुन्थ्यो तर प्रहरीले बल प्रयोग गरी केसीलाई ट्रमा सेन्टर पुर्‍यायो । त्यसक्रममा उहाँमाथि दुर्व्यवहार...
ट्रमा सेन्टरबाट स्वेच्छिक डिस्चार्ज लिएका डा. गोविन्द केसी शिक्षण अस्पतालमा
६ असोज, २०७७ काठमाडौं । अनसनसरत डाक्टर गोविन्द केसीले ट्रमा सेन्टरबाट स्वेच्छिक डिस्चार्ज लिनुभएको छ । आज नेपालगन्जबाट काठमाडौं आएका उनले टिचिङ अस्पताल जान खोजे पनि प्रहरीले जबर्जस्ती ट्रमा सेन्टर पुर्‍याएको थियो। दिउँसो ट्रमा सेन्टर पुर्‍याइएका डा केसीले साँझ...
१९औं पटक अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसी यसो भन्नुहुन्छ…